ချာရွန် (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
Charon in near-true color, brightness enhanced[note ၁]
/ˈʃærən/ SHARR-ən or /ˈkɛərən/ KAIR-ən[note ၂]
0.21 km/s[note ၃]
ချာရွန် သည် ပလူတို၏ ဂြိုဟ်ရံလ ၅ စင်းထဲမှ အကြီးဆုံး ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်သည်။ ယင်းအား ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် James Christy ဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပလူတိုဂြိုဟ်၏ အချင်း ထက်ဝက်ခန့်ရှိသောကြောင့် ချာရွန်သည် မိခင်ဂြိုဟ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရွယ်အစား အင်မတန်ကြီးသည်။ ချာရွန်၏ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင် နီညိုရောင်သမ်းနေပြီး tholin ဟုခေါ်သည် အော်ဂဲနစ် မိုက်ခရိုမော်လီကျူးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ tholin များသည် ပလူတိုလေထု၏ မီသိန်း၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် အခြားဆက်စပ်ဓာတ်ငွေ့များမှ ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ New Horizons အာကာသယာဉ်သည် ပလူတိုအနီးသို့ ချဉ်းကပ်ပျံသန်းသည့် တစ်ခုတည်းသော အာကာသယာဉ်တစ်စင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချာရွန်အနီး ၂၇,၀၀၀ km (၁၇,၀၀၀ mi) အကွာသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။
↑ Photograph of Charon, taken by the Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) camera aboard New Horizons, during its flyby of the Pluto system on July 13, 2015, atadistance of 470,000 kilometers (290,000 miles). Charon's brightness has been exaggerated in this photograph in order to make features more clear, as the moon has an average albedo 0.2 to 0.5. A better representation of the moon's actual brightness can be found in this composite of New Horizons images. Based onaLORRI image.
↑ The latter per the anglicized pronunciation of the ဂရိ: Χάρων.
↑ Calculated on the basis of other parameters.
↑ Jennifer Blue (2009-11-09)။ Gazetteer of Planetary Nomenclature။ IAU Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN)။ 2010-02-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Planetary Satellite Mean Orbital Parameters — Satellites of Pluto။ NASA's Jet Propulsion Laboratory (2013-08-23)။
↑ "Orbits and Photometry of Pluto's Satellites: Charon, S/2005 P1, and S/2005 P2" (5 Jun 2006). The Astronomical Journal 132 (1): 290–298. doi:10.1086/504422. Bibcode: 2006AJ....132..290B.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Stern, S.A. (16 Oct 2015). "The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons". Science 350 (6258): aad1815. doi:10.1126/science.aad1815. PMID 26472913. Bibcode: 2015Sci...350.1815S.
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Stern၊ S.A.; Grundy၊ W.; McKinnon၊ W.B.; Weaver၊ H.A.; Young၊ L.A. (15 Dec 2017)။ "The Pluto System After New Horizons"။ arXiv:1712.05669 [astro-ph.EP]။
↑ "Mean radius and shape of Pluto and Charon from New Horizons images" (1 May 2017). Icarus 287: 12–29. doi:10.1016/j.icarus.2016.06.027. Bibcode: 2017Icar..287...12N.
↑ Classic Satellites of the Solar System (April 15, 2007)။ 2007-10-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ David Jewitt (June 2008)။ The 1000 km Scale KBOs။ Institute for Astronomy (UH)။ 2008-06-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Measuring the Size ofaSmall, Frost World" (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ European Southern Observatory။ 2006-01-04။ 2006-01-18 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-10-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Charon Discovery Image။ NASA's Jet Propulsion Laboratory (16 December 2003)။2May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2013-07-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Why Pluto’s Moon Charon WearsaRed Cap"၊ New York Times၊ 14 September 2016။ 2016-09-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချာရွန်_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=741840" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၁၀:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။